Talibanka oo dilay 21 kamid ah maleeshiyo taageersan Dowlada Pakistan • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Talibanka oo dilay 21 kamid ah maleeshiyo taageersan Dowlada Pakistan
Talibanka oo dilay 21 kamid ah maleeshiyo taageersan Dowlada Pakistan
Xoogaga Talibanka ayaa dilay askar ka tirsan maleeshiyeed beeleedyo taageersan dowlada Pakistaan oo xarumo ku lahaa waqooyiga dalkaasi.
Xoogaga Talibanka ayaa meel aan ka fogeyn magaalada Peshawar ee waqooyiga wadanka Pakistan ku dilay 21 askari oo kamid ah koox ciidamo ah oo ay gacanta ku dhigeen kadib markii ay la wareegeen fariisimihii ay ku sugnaayeen.
Kooxda askarta ah ee la qabtay ayaa dhamaantood kasoo jeeda Qabiilka Pashtuunka, waxayna kamid ahaayeen ciidamo dhawaan ay aruurisay dowlada Pakistaan, isla markaana dooneysay inay kula dagaalanto xoogaga Talibanka oo awood kuleh waqooyiga dalka Pakistaan.
400 kamid ah dagaalyahanada Talibanka ayaa weerar ku qaaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamo beeleedkan dowlada Pakistan aruurisay, waxayna gacanta ku dhigeen 23 kamid ah askartii halkaasi ku sugnaa.
Beesha Pashtuunka oo waan waan la gashay Talibanka ayaa lagu guuleysan waayey in wadaxaajoodkaasi lagu soo siidaayo askartaasi nolosha lagu qabtay, waxaana la sheegay in habeenimadii xalay ay Talibanka toogteen askartii ay qabteen.
Meydadka Askartan ayaa lagu soo daadiyey garoon kubada lagu ciyaaro oo ku yaal duleedka magaalada Peshawar, waxaana meydadka laga dhex helay mid kamid ah askarta oo aan dhiman oo dhaawacyo culus soo gaareen, halka la sheegay in mid kamid ah askartii la qabtay uu asagu ka fakaday rasaastii lagu furay kadibna ciidamada ku wargeliyey goobta lagu laayey askartaasi.